တအားကြီးပဲ လွဲနေတယ်… လွဲလွဲကြီးက ဆိုးပါတယ် | ATK's Explicit Blog
တအားကြီးပဲ လွဲနေတယ်… လွဲလွဲကြီးက ဆိုးပါတယ်
အခုလည်း သူ့သူငယ်ချင်းဆိုသူတွေက အပြာစာအုပ်ထဲက ဟာတွေကို အဟုတ်မှတ်ပြီး ပြိုင်တူ ဇာတ်သိမ်းတာ ကောင်းတယ်လို့ အကြံဝိုင်းပြုကြတယ်။ တကယ်က မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီး အကုန်လုံး မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော အများစုဟာ သူတို့ ဇာတ်သိမ်းပြီးတဲ့နောက် ၃-၄ မိနစ်ကြာတဲ့အထိ အရှိန် မသေသေးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းချိန်လွန်ကာလဟာ ယောက်ျားတွေဖြစ်နေကျ ဘောလုံး လေလျှော့လိုက်သလို ဟုတ်ခနဲ ငြိမ်းသွားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဖွဲမီးငြိမ်းသလို တအိအိ ပြီးဆုံးသွားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ ဇာတ်သိမ်းပြီးချိန်မှာ အမျိုးသားဘက်က ဆက်လက် ချစ်တင်းနှောနေနိုင်သေးတယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးများအတွက် သာယာမှုကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်ပိုင်းမှာ ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ ညင်ညင်သာသာ နွေးနွေးထွေးထွေးသာ ရှိမယ်ဆိုရင် သိပ်မကြာခင်အတွင်းမှာ နောက်တစ်ကြိမ်တောင် ချမ်းသာသုခ ရရှိနိုင်ပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့တွေ (အထူးသဖြင့် ပထမတစ်ကြိမ် ဇာတ်သိမ်းချိန်မှာ တအား ပေါက်ကွဲပြင်းထန်သွားရင်) ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကို မလိုလားတတ်တော့ပါဘူး။ ပထမတစ်ကြိမ်နဲ့တင် စိတ်အထာကျသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါဖြင့် မေးစရာ ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားဘက်က ဘယ်အချိန်မှာ ဇာတ်သိမ်းသင့်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အစောကြီးကတည်းက တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းထားတာပါပဲ။ သူ့ဘက်က မီးစိမ်းပြတဲ့အချိန်မှာ ယောက်ျားအနေနဲ့ ဇာတ်သိမ်းလိုက်တာဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် ကျေနပ်မှုကို အပြည့်အ၀ ရစေနိုင်ပါတယ်။ အဲလို မညှိနှိုင်းချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အကြမ်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးဘက်က ဇာတ်သိမ်းပြီးတဲ့နောက် ၃ မိနစ်လောက် ၀န်းကျင်မှာ အမျိုးသားဘက်က ဇာတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဟာ အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သည်နေရာမှာ ဇာတ်သိမ်းမြန်တတ်သူ အမျိုးသားများဘက်က မေးလာမယ့် မေးခွန်းတစ်ခွန်းကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ဇာတ်သိမ်းစောနေတာကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာပါ။ လူပျိုလေးတွေက အဲဒီ့မေးခွန်းကို ပိုမေးတတ်ကြတယ်။ ဇာတ်သိမ်း မြန်ခြင်း၊ နှေးခြင်းဟာ မိမိရဲ့ စိတ်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကို ထိန်းနိုင်သူက ထိန်းနိုင်ပြီး မထိန်းနိုင်သူက မထိန်းနိုင်ပါဘူး။ အဲတော့ မိမိစိတ်ကို ထိန်းသိမ်း လေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်၊ တစ်နည်းပြောရရင် အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာ ထိန်းနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါက အတွေ့အကြုံနည်းတဲ့ လူပျိုလေးတွေအတွက် ခက်နေဦးမှာပါ။
ရှိသေးတယ်။ အပြာစာအုပ်တွေထဲမှာ အမျိုးသမီးက အဖန်ဖန် ဇာတ်သိမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးပါ။ အဲဒါလည်း ရှာမှ ရှားတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ။ သိပ်ကို စိတ်သန်တက်ကြွလွယ်တဲ့ အမျိုးသမီး အနည်းစု၊ ဆယ်ယောက် မှာ တစ်ယောက်လောက်သာ အဲဒါမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ တစ်ခါလောက် ဇာတ်သိမ်းပြီးရင် ကျေနပ်သွားတတ် စမြဲပါပဲ။ သည့်ထက်ပိုတဲ့ အများစုကတော့ အပြာစာအုပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်လို ကိုးကွယ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားသားများကြောင့် သေသာသွားတယ် ဇာတ်သိမ်းခန်းဆိုတာကို မရောက်နိုင်ဘဲ ကလေးတွေ တစ်ဒါဇင်လောက် မွေးထားခဲ့ကြရတာပဲ အဖတ်တင် ကျန်ရစ်တတ်ပါတယ်။
← အန္တရာယ် အကင်းဆုံး လိင်စိတ် ဖြေဖျောက်နည်း
နှာခေါင်းမပါတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆီက စာ၊ ရင်နာစရာ…. ရွံရှာစရာ… →
အမျိုးသမီးတွေ ပြီးတယ်(ဇာတ်သိမ်းတယ်)ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ယောင်္ကျာလေးတွေအနေနဲ့ဆက်ဆံနေတုန်းဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတာလေးပြောပြပါလားဗျာ။ မိန်းကလေးပြီးတယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှမကြုံဖူးလို့ပါ.
ဆရာ့စာတွေကိုသရဖူmagazineကနေစဖတ်ခဲ့တာခုချိန်ထိပါပဲရှင့်။ဆရာ့စာတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ sexကိစွကိုအတော်အတန်လေးတိးမိခေါက်မိရှိခဲ့ရပါတယ်။အခုကဆရာကိုsexကိစွရင်ဖွင့်လို့ ရတဲ့အဖေတယောက်ကိုသမိးကရင်ဖွင့်တဲ့သဘောလေးပါရှင့်။သမိးကအပျိုစင်ဘဝကတည်းကရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်လိုချစ်သူနဲ့ မှအစွန်းထင်းမခံရအောင်နေခဲ့တာပါ။ဒါကလဲကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်အမျိုးသားကိုဘဲအပျိုစင်ဘဝကိုပေးအပ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ ပါ။ဒါပေမဲ့ဆရာရယ်ခုအိမ်ထောင်ကျပြိးလို့ ကလေးတယောက်သာရလာတယ်သမိးမှာအိမ်ထောင်ရေးသုခဆိုတာဘာမှန်းကိုမသိတတ်သေးပါဘူး။သူနဲ့ရခါစတုန်းကတော့အတူနေတဲ့အချိန်မှာရှက်တာနဲ့နာတာကလွဲရင်ဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။ခုကျတော့လဲကိုယ့်လင်သားကျေနပ်သွားရင်ပြိးတာပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ဘဲရှိပါတော့တယ်။ပြသနာကသမိးကစိတ်ပါနေပြိဆိုသူကပြိးသွားပြိဆရာ။တခါတလေကျတော့လဲသူ့ ကိုတကိုယ်ကောင်းသိပ်ဆန်တာဘဲဆိုပြိးစိတ်ဆိုးမိတယ်ဆရာရယ်။သမိးဘက်ကခံစားချက်ကိုသူဘယ်တော့မှမစဉ်းစာပေးဘူး။သူဖြစ်ချင်ပြိဆိုလဲဂမူးရှူးထိုးနဲ့ အတင်းဘဲဆရာရေ။ပြောရင်ဆရာယုံပါ့မလားဘဲ။အိမ်ထောင်သက်သုံးနှစ်အတွင်းမှာသမိးဇာတ်သိမ်းခမ်းရောက်တယ်ဆိုတဲ့အရေအတွက်ကလေးကြိမ်ထက်တော့မပိုဘူးထင်တာဘဲ။အဲ့လိုပြောနေလို့ သမိးကဒါကိုအတင်းလိုလားနေတာလဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်။ဒါကြောင့်နဲ့လဲသူ့ ကိုအချစ်လျော့မသွားပါဘူး။သူသမိးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုလဲသိပါတယ်။ဒါပေမယ့်တခါတလေသူပြိးသွားလို့ သမိးကတောင်းဆိုရင်တောင်ကျောပေးပြိးအိပ်နေတော့တာပါပဲ။အဲလိုအချိန်ဆိုသမိးကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲရှက်တယ်။သူ့ ကိုလဲမကျေနပ်သလိုခံစားရတယ်ဆရာရယ်။နောက်တော့လဲသူကျေနပ်သွားရင်ပြိးတာပါပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဘဲပြိးသွားတာခုချိန်ထိပါပဲ။တစ်ခြားဘက်တွေမှာတော့သူမှာဘာမှပြောစရာမရှိအောင်တာဝန်ကျေပါတယ်ဆရာ။သူ့ ကိုဆရာ့စာတွေဖတ်စေချင်လို့ ပြပေမယ့်လဲသမိးနဲ့ ဆန့် ကျင်ဖက်သူကစာဖတ်ရမှာကိုအရမ်းဝန်ကြိးတဲ့သူဖြစ်နေပြန်ရော။သူ့ ကိုလဲဒိကိစွတွေမှာနှစ်ဥိးနှစ်ဖက်မျှတွေးတတ်စေချင်တယ်ဆရာရယ်။ရင်ဖွင့်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးကျေးဇူးပါဆရာရှင့်။. အားပေးလျှက်. သမိး
Thanks for the article. This let me know the things that I wanted to know.
၀င်ဖတ်သွားပါတယ်ဆရာ။ ဗဟုသုတလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
rain drop permalink
အမျိုးသမီးတွေ ပြီးတယ်(ဇာတ်သိမ်းတယ်)ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ယောင်္ကျာလေးတွေအနေနဲ့ဆက်ဆံနေတုန်းဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတာလေးပြောပြပါလားဗျာ။ မိန်းကလေးပြီးတယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှမကြုံဖူးလို့ပါ. ဆက် ဆက် ရေး ပေး ပါ .. အရမ်း သိချင် လို့ ပါ .
ကျွန်တော် အမျိုးသမီှးဇာတ်သိမ်းတာ မြင်ဖူးတယ် ဆရာ ။ ပြီးတော့သူတို့ က တစ်ချက်နား လိုက်တာ နဲ့နောက်တစ်ခါ အတွက် အဆင် သင့် ဖြစ်နေတယ်ဆရာ အဲဒါ မိန်းကလေး တွေ တဏှာ စိတ်ပြင်းလို့ လားဆရာ .လူကြိး တွေ က ပြောတယ် အမျိုးသမီးတွေ က ယောကျာ်းလေးတွေ ထက် တဏှာစိတ်ပိုပြင်းတယ် ဆရာ အဲဒါဟုတ်လား။ အမှားပါရင် ခွင့် လွှတ်ပါဆရာ ။ သိချင်လို့ မေးကြည့် တာပါ
ဘယ် လူကြီးတွေကများ အဲလို စကားမျိုး ပြောသလဲ မသိဘူးနော်။ တော်တော် စုတ်ပဲ့တဲ့ လူကြီးတွေ၊ ဘာမှ မသိတဲ့ လူကြီးတွေဆိုတော့ အချိန်မစီးတဲ့ လူကြီးတွေပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမတို့ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံချင်း မတူသလို လိင်မှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုလည်း ခြားနားပါတယ်။ ရိုင်းရိုင်းပဲ ပြောပါရစေ၊ ကိုယ်အင်္ဂါဖွဲ့စည်းပုံအရ ယောက်ျားတစ်ယောက် လိင်ဆက်ဆံပြီးသွားလို့ ငယ်ပါ ပျော့သွားချိန်မှာ မိုးပေါ်က နတ်သမီးပဲ ကျလာလာ၊ ဘာဆိုဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ အလားတူပဲ “တန့်သွားတဲ့ ကာလ”က ယောက်ျားအတွက် ကြာပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက် လိင်ဆက်ဆံပြီးသွားချိန်မှာတော့ သူ့ကိုယ်အင်္ဂါဖွဲ့စည်းပုံအရ သူက ဘာပဲ ထပ်လာလာ လက်ခံမယ်ဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူက အပေးမှ မဟုတ်ဘဲ အယူပဲကိုး။ အလားတူပဲ “တန့်သွားတဲ့ကာလ”က လေးသွားပါတယ်။ ယောက်ျားက အရှိန်တက်ဖို့ မြန်သလောက် ထိပ်ဆုံးကို ရောက်သွားဖို့လည်း လွယ်တယ်၊ ပြီးတော့ ပြန်ကျတာလည်း မြန်တယ်။ အတက်ကြမ်း၊ အကျကြမ်းတယ်ပေါ့။ မိန်းမမှာက အရှိန်တက်ဖို့ အချိန်အများကြီး ယူရတယ်။ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ဖို့လည်း ယောက်ျားလောက် မလွယ်ဘူး။ ပြီးတော့ ပြန်ကျတာလည်း ယောက်ျားလို ဇောက်ထိုးဆင်းတဲ့နည်းနဲ့ ပြန်ကျတာမဟုတ်ဘဲ ဆင်ခြေလျှောမှာ ဆင်းသလို တအိအိနဲ့ ပြန်ကျစမြဲပါ။ အဲလို ပြန်ကျနေချိန်မှာ တချို့တွေက လှုံ့ဆော်ရင် လှုံ့ဆော်တတ်သလောက် ပြန်တက်သွားတတ်တယ်။ ထိပ်ဆုံးကို ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီ့အခါမှာလည်း ပထမဆုံးအခါ ထိပ်ဆုံးရောက်တုံးကထက် ပိုလို့တောင် သာယာတဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိတတ်ကြတယ်။ တချို့ အရေအတွက်နည်းသော မိန်းမတွေကတော့ ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ရင် “တန့်သွားတဲ့ ကာလ”ရယ်လို့ သတ်သတ် မရှိနိုင်တော့ဘဲ ကြိမ်ဖန်များစွာ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ “တဏှာစိတ်”ဆိုတဲ့ လိင်စိတ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံများနဲ့ မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါများရဲ့ သဘာဝအရ ကွာခြားချက်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဏှာစိတ် ပိုပြင်းတာ ယောက်ျားတွေပါ။ “ဆင်လိုက်တုန်း ငယ်ပါတင်းတယ်”ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားဟာ ယောက်ျားတွေရဲ့ တစ်ချိန်လုံး ဏှာထတတ်တဲ့ သဘာဝကို ပီပီပြင်ပြင် ထပ်ဟပ်တဲ့ စကားပါ။ မိန်းမအများစု (၉၅%ကျော်) က အဲလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ။ အခု လိုဖြေကြားပေးတဲ့ အတွက် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ ကို ကျွန်တော် ပြန်ပြီး ပညာပေးလို့ ရသွားပြီ။ သူတို့့် အားလုံးကျွန်တော် ယုံသလို ပဲ ယုံကြတာ ။
ဆရာ့ ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါ ။ ဆရာ စာတွေ ကို အမြဲ အားပေးနေပါတယ်။
Myo Min Maung permalink
တစ်ခုတော့ ပြောကြည့်ပါရစေ ဆရာ… ကျွန်တော်ကြုံဖူးတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ သူပြီးသွားရင် ခဏနားမှ ရပါတယ်ဆရာ…. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ ပြီးသွားတဲ့ အခါ ထပ်ပြီး ဆက်တိုက်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် ကျင်တာကို ခံစားရတယ်တဲ့… အဲဒီတော့ နောက်တစ်ခါ ဆက်ဆံဖို့ အတွက် သူတို့ကို အချိန်ပေးရပါတယ်…. ကျင်တာမှ ဘာမှကို နိုးဆွလို့ကို မရတော့တာ ဆရာ…. အဲဒါ ဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်….
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျဉ်တတ်ပါတယ်။ အစေ့ကို လှုံ့ဆော်လိုက်တဲ့အတွက် အစေ့မှာ ကျဉ်နေတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သဘာဝတရားကြောင့်လို့သာ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သဘာဝချင်း မတူပါဘူး။
Arkar Phyo permalink
မြန်တာကိုတော့ သိပါပြီ ဆရာ…. ဒါဆိုရင်တော့ မနေတာကြာလို့ စိတ်ပြန်နုသွားတယ်လို့ သတ်မှတ်ရတော့မယ် 😀
ဝင်ဖတ်၍ အားပေးသွားပါတယ် ဆရာ။ကျေးဇူးပါ။